ကြီး ငယ် ရွယ် လတ် ဆိုဒ်စုံပါပဲ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ကြီး ငယ် ရွယ် လတ် ဆိုဒ်စုံပါပဲ ….
ကြီး ငယ် ရွယ် လတ် ဆိုဒ်စုံပါပဲ ….
Posted by weiwei on Nov 2, 2010 in Photography, Travel | 18 comments
ဒီတစ်ခါခရီးသွားသတင်းကတော့ ခါတိုင်းနဲ့မတူပါဘူး … သဘာဝရှုခင်းတွေအပြင် တခြားထူးဆန်းထွေလာများပါ မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ဖောက်သည်ချချင်ပါသေးတယ် … နွေကျောင်းပိတ်ရက် တစ်ခုမှာ ကျွန်မတို့ ဗမာသူငယ်ချင်း မ်ိန်းကလေး ၃ ယောက်စုပြီး ခရီးသွားအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ တစ်ညအိပ်ခရီးအတူသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမနေ့ကတော့ လှပတဲ့ သဘာဝဥယာဉ်တစ်ခုကို လည်ပတ်ခဲ့ရပြီး ဒုတိယနေ့ကတော့ ရေပူစမ်းမှာ ရေပူစိမ်ရမယ့်အစီအစဉ်ပါ။ ပထမနေ့ခရီးစဉ်အပြီးမှာ ခရီးသွားလမ်းညွှန်က ကျွန်မတို့အားလုံးကိုပြောပါတယ်။ ရေပူစိမ်တဲ့ကန်က ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ပဲ ၀င်စိမ်လို့ရမယ်တဲ့။ အဲဒီရောက်မှာ ငှားဝတ်ချင်လဲရတယ် ၀ယ်ဝတ်ချင်လဲရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မတို့က ဒုက္ခတော့ရောက်ပြီ တစ်သက်မှာ တစ်ခါမှ ရေကူးဝတ်စုံလဲမ၀တ်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့်လဲ ရောမရောက်ရောမလိုကျင့်ရမှာပေါ့လို့ပဲတွေးပြီး ညဘက်ရေကူးဝတ်စုံထွက်ဝယ်လိုက်ရပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ကျတော့ ရေပူစမ်းနေရာကိုရောက်သွားပါတယ်။ အဆောက်အဦးအကြီးကြီးတစ်ခုထဲမှာ ရေချိုးတဲ့နေရာ နဲ့ ၀တ်သွားတဲ့အ၀တ်တွေထည့်သိမ်းတဲ့ ဘီဒိုလေးတွေကို ကိုယ်ပိုင်သော့နဲ့ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်မတို့လဲ ဘီဒိုလေးတွေရှိတယ့် ဟောလ်ခန်းထဲကို ၀င်သွားလိုက်ပြီး အ၀တ်လဲဖို့ ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်။ ကျွန်မတို့မှာ ကြိုတင်မစီစဉ်ခဲ့တဲ့အတွက် ၃ ယောက်ပေါင်းမှ ထမီတစ်ထည်ထဲပါတော့ တစ်ယောက်တစ်လှည့်ဆိုပြီး အ၀တ်လဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲ တရုတ်မတွေအားလုံးက ဘာကြားခံပစ္စည်း (ထမီတို့ သဘက်တို့) မသုံးကြပဲနဲ့ ဒီအတိုင်းအကုန်ချွတ်ချပြီး အလွယ်တကူလဲလိုက်ကြပါတော့တယ်။ ကျွန်မတို့မှာ မျက်လုံးတွေပြူးလို့ … အချင်းချင်းဆိုပေမယ့် အဲဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတာအမှန်ပါ … အံ့သြလွန်းပြီး ခဏလောက်ကြက်သေသေသွားတယ် … သူတို့တွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန်လဲလှယ်တော့ ကျွန်မတို့ ၃ ယောက် ကို တအံ့တသြနဲ့ ကြည့်သွားကြပါတယ်။ အပြန်အလှန် အံ့သြနေတာပေါ့လေ … ရေစိမ်တဲ့ကန်တွေလဲ အများကြီးပါ။ အဲဒီမှာ တစ်ကန်ကတော့ ငါးအရှင်နဲ့အတူစိမ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်လို့ကြော်ငြာတယ်။ တစ်နာရီ ယွမ် ၆၀ တဲ့။ ကျွန်မတို့တော့ မစိမ်ပါဘူး။ သဘာဝအလျှောက်တောင်ပေါ်က ကျလာတဲ့ရေပူတွေကို ကန်ထဲထည့်ထားတာပါ။ တစ်ပါတ်ကို ၃ ခါပဲ ရေလှယ်ပေးလို့ သန့်ရှင်းမှုကို အထူးဂရုစိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။ ရေစိမ်ပြီး ရေချိုးကြတဲ့အဲဒီအခါမှာလဲ သူတို့တွေက မိမွေးဖမွေးအတိုင်း ဒီအတိုင်း အားရပါးရချိုးနေကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကတော့ ရေကူးဝတ်စုံဝတ်လျက်နဲ့ပဲ ဆပ်ပြာတိုက်ပြီးရေချိုးကြတော့ အပြန်အလှန်ထူးဆန်းနေကြပြန်ပါသေးတယ်။ အဲဒီနေ့ကတော့ အရွယ်စုံ ဆိုဒ်စုံကို မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ဖူးလိုက်တဲ့ ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ် … သူတို့တွေအဖို့ကတော့ ရေကူးကန်တွေ ရေချိုးခန်းတွေမှာ အဲဒီလိုပဲ လုပ်နေကျမို့လို့ ဘာမှမထူးဆန်းကြတာပါလား …ရေချိုးတဲ့နေရာနဲ့အ၀တ်လဲတဲ့နေရာကိုတော့ အမျိုးသားအမျိုးသမီး သီးသန့်ခွဲထားပေမယ့် ရေစိမ်တာကိုတော့ ရောထားပါတယ်။
အလို ဟိုရှေ့ မှာ တရုပ်မတွေ ရေစိမ်နေကြပါလား
ချောင်းစရာမလိုဘူး၊ ကြောင်ကြီးက သူတို့ပေါင်ပေါ်တောင်ရောက်နေပြီ။ ရှယ်ပဲ။
အဘ အဓိဌာန်ဝင်နေတယ် နောက်မှဖတ်တော.မယ်နော်။
အဘကလဲ ဘာပုံမှ မပါပါဘူး … အဘက အကြားအမြင်ရပုံပေါ်တယ် … စာကိုမြင်တာနဲ့ ပုံဖော်နိုင်တယ်လား ???
အစက စမဖတ်ပဲ ကျော်ဖတ်မိလို့နဲ့တူတယ်… ဘယ်ကို သွားတယ်ဆိုတာ ရှေ့က ပိုစ့်တွေ ရှာဖတ်မှ သိရတော့မယ် ထင်တယ်… အစ်မရေ နေရာလေး တစ်ချက်လောက် ညွှန်းပါဦးနော်.
နေရာက တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်း Dalian မြို့ကနေ ၃ နာရီလောက်ကားစီးရတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ အဲဒီမြို့ရှုခင်းတွေ မတင်ရသေးပါဘူး။ နောက်မှ တင်ပေးမယ် … အရမ်းလှတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မြို့ကလေးတစ်မြို့ပါ ….နေရာမဖော်ပြလိုက်တာက အဲဒီလိုမျိုးရေပူစမ်းတွေက တရုတ်ပြည်မှာ အများကြီးရှိပြီးတော့ အားလုံးလိုလိုက အဲဒီအတိုင်းပဲမို့လို့ပါ …. အဓိက သတင်းပေးတာက သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ နေထိုင်မှု အလေ့အကျင့် …
သိကြတဲ့အတိုင်း ..စစ်တမ်းကောက်တာဝါသနာပါလို့ … အဲဒီဆိုဒ်တွေ လိုက်တိုင်းချင်လိုက်တာ ….။
ကိုပေါက်က တော့ ပြောတာကြားယုံနဲ့ မယုံတတ်ဘူး။
သွား အုံး မှာ……………………………………………………
အခုမှပုံလေး ၂ ပုံထဲတင်ပြီး ရေးလိုက်တဲ့စာတွေ
ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာ မရိုက်ခဲ့ရလို့ စာနဲ့ပဲ မြင်အောင်ရှင်းပြရတာပါ …. ရွာသူ ရွာသားတွေက ပညာရှိတွေမဟုတ်လား … ပုံတောင်မလိုဘူး သဘောတွေပေါက်ကုန်ကြတယ် ..
မဝေပြောသလိုပဲ ကျနော်လည်းအတော်အံ့သြမိပါတယ် … ကျနော်လည်းတခါတွေ့ဖူးပါတယ်ေ၇ကူးကန်မှာ ယောင်္ကျားလေးအကုန်လုံးလုံးကအဲလိုဖြစ်တဲ့အပြင် သားအဖဖြစ်သူနှစ်ယောက်မှာ သားဖြစ်သူကလေးလေးက (ကန်တော့) အဖေရဲ့ဖွားဖက်တော်ကို ပုတ်ခပ်ဆော့ကစားနေပါသေးတယ်ေ၇ချိုးရင်း… အပြင်မှာအဲဒီကိစ္စကိုထူးဆန်းလို့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုမေးကြည့်တော့လည်း ဒါကမထူးဆန်းပါဘူးတဲ့ အိမ်မှာဆို အဖေနဲ့သား၊ အမေနဲ့သမီး အမြဲရေချိုးနေကြပါတဲ့ …
ဂျပန်က လူတွေဒီမှာဖတ်နေကြတာပဲ..။ သူတို့လည်း အွန်းစင်းနဲ့ အိုဖူရိုး ထဲကဓါတ်ပုံတွေရိုက်တင်ရင်ကောင်းမယ်.။
အဲဒါဆိုရင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိုဒ်စုံဖြစ်ကုန်မှာ..။
တကယ်က မြန်မာတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ နယ်တွေမှာ မြစ်ထဲချောင်းထဲ .. ဒီအတိုင်းဆင်းချိုးနေတာပါပဲ.။
နိုင်ငံခြားသားတယောက် ဗီဒီယိုရိုက်ထားတော့ .. သူ့မှာအံ့သြလို့.. လာပြတာ..။
ရင်လျှားထားတဲ့ ထမီလေးဖြည်းဖြည်းချင်းမ, လို့ … ရေထဲဆင်းပြီး ရေထဲတကိုယ်လုံးေ၇ာက်မှ ထမီကို ကုန်းပေါ်ပစ်တင်လိုက်တာခင်ဗျ..။
ဒီပိုစ်မှာ ၀င်မမန်းဘူးလို့ စဉ်းစားထားတာ..
သူများတွေ ရေးတော့ ဆူး မြင်ခဲ့ တာလေး နဲနဲ ၀င်ဖောမယ်။
တရုတ်ပြည်မှာ အိမ်သာ အရမ်းနံပါသည်.. အလွန်ညစ်ပတ်သည်.. အိမ်သာရှိသော အဆောက်အအုံ ထဲ ၀င်လိုက်လျှင်ပင် နှာခေါင်းပါ မွန်သွားသလို.. ဆက်ပြီး အသက်အောင့် အိမ်သာ အတွင်းသို့ဝင်လျှင် မျက်စိပါစပ်တဲ့ အထိ.. အနံများ ဆိုးရွားသည်။ အိမ်သာများတွင် တံခါး ရှိသော်လည်း တရုတ်မများ အိမ်သာ တံခါး မပိတ်ဘဲ.. မြန်မြန်သုတ်သုတ် ထိုင်ပေါက်ပြီး ထ သွားတတ်သည်။ အိမ်သာများတွင် ရေမရှိ.. စိတ်ပျက်စရာ အလွန်ကောင်း၏.. ကိုယ်ပိုင် ရေသန့်ဘူးများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ပြုလုပ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် တရုတ်ပြည်တွင် တယောက်နဲ့ တယောက်.. မြင်ဘူးသည်မှာ မဆန်းလှပါ။ မြန်မာပြည်မှ ဓလေ့နဲ့ တော်တော် ကွာလှသဖြင့်.. စိတ်မသက်သာစရာ ကောင်းလှသည်။ လှပသည့် ဒေသ ရှူခင်းများကတော့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ဈေးဝယ်လျှင် ၁၀၀ ခေါ်လျှင် ၂၀လောက်က စပြီးစစ်လို့ ၂၀နဲ့ ရခဲ့ရင်တောင် တခြား လူမှ ၅ကျပ်လောက်နဲ့ ရတတ်သဖြင့်.. ဈေးဝယ်ရာတွင်လည်း စိတ်မသက်သာလှပေ…
ဆူးပြောတာ မှန်သင့်သလောက်မှန်ပေမယ့် အခုတော့ တော်တော်များများမှာ ခောတ်မှီတိုးတက်သွားပါပြီ … အိမ်သာကိစ္စ အခက်အခဲ အတော်နဲသွားပြီ … ခောတ်မှီသန့်ရှင်းတဲ့အိမ်သာတွေ နေရာတိုင်းမှာ အလျင်အမြန်အစားထိုးဝင်ရောက်လာတာကို သတိထားမိတယ် … ကျွန်မက ခရီးတစ်ခု (တစ်နေရာ) ကို ၂ ခေါက် ၃ ခေါက် ၄ ခေါက်လို့ သွားထားလို့ တစ်ခါနဲ့တစ်ခါ တိုးတက်မှုကို အသိအမှတ်မပြုပဲမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး … ဈေးဝယ်တာကတော့ မလည်ရင်ခံရမယ် …
တရုတ်ပြည်က ပြန်လာ ခါစတုန်းက ဆို.. အတွေး တခု တွေးမိတယ်… တရုတ်ပြည်မှာ ရေကြီးတာ အိမ်သာတွေ ညစ်ပတ်လွန်းလို့.. မိုးနတ်မင်း ရေဆေးချတာ ဖြစ်မယ်လို့ အပြောင်အပျက် ပြောမိသေးတယ်။
ဂျပန်သွားစဉ်က ခရီးသွားအဖွဲ့ ရေပူစမ်းပါအောင် ပိုက်ဆံ ပို အကုန်ကျခံကာ လုပ်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ရေပူစမ်း ရှိသော ဟိုတယ် တွင် ရေပူစမ်း မှာ ရေချိုးခြင်း များ ပြုလုပ်နိုင်သည် ပိုက်ဆံ ထပ်မယူပါ။ ဟိုတယ် မရောက်ခင် လမ်းမှာ ဂိုက်ပြောသော စကားများ ပြန်လည်ပြောရလျှင် နားမလည် တချက် နားလည် တချက်နဲ့.. သူပို့ဘူးတဲ့ ခရီးသွားတွေမှာ မြန်မာတော့ ဒါပထမဆုံး.. တခြားလူမျိုး.. ထိုင်း ဗီယက်နမ်.. စသဖြင့်ပေါ့.. စုံနေတာဘဲ ပြောတာ.. တချို့ကတော့ ရေပူစမ်းဟိုတယ်မှာ တည်းတော့ ရေချိုးကြတယ်.. တချို့ကတော့ မချိုးကြဘူး.. ရေပူစမ်းမှာ ချိုးမယ် ဆိုရင် အရင်ဆုံး အခန်းလေးတခုကို ဖြတ်ရတယ်.. အဲဒီ အခန်းထဲမှာ ဘီဒို တခုဖွင့်ပြီ.. ၀တ်ထားတာ အကုန်ချွှတ်ပြီး.. ဘီဒိုထဲ ကိုထည့်သိမ်းပြီး မျက်နှာသုတ်ပုဝါ တံတောင်လောက် ရှိတဲ့ ဟာလေးဘဲ ယူသွားလို့ရတယ်။ ကျန်တာ တော့ မယူသွားရဘူး.. လူကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မေ့စိအောက်ကို မကြည့်ဘဲ မော့တော့တော့ လျောက်.. ကိုယ်က သူများ မကြည့်ရင် သူများ ကိုယ်ကို ကြည့်တာ မသိပါဘူးတဲ့.. နောက်ပြီး တံတောင်လောက် ဘဲ ရှိတဲ့ မျက်နှာသုတ် ဆိုတော့.. အပေါ်ကို ဖုံးချင်ရင် အောက်က လွတ်မယ်.. အောက်ကို ဖုံးရင် အပေါ်က လွတ်နေမယ်.. ဒီတော့ ရှက်တတ်ရင် မျက်နှာ အုပ်ပြီး ရေထဲဆင်း.. ရေထဲက အပူချိန် အရမ်းမြင့်တဲ့ အတွက်.. ရှက်ရှက်နဲ့ ၀ုန်းကနဲ ပြေးဆင်းရင်.. ၀ုန်းကနဲ ပြန်ပြေးတက်ရင်.. အားလုံးက ၀ိုင်းပြီးကြည့်လို့ ပို အရှက်ကွဲမယ်.. ဒီတော့ ရေထဲ ဆင်းမယ် ဆိုရင် ပထမ ခြေဖျားကနေ အကျင့်ရမှ တဖြေးဖြေး တိုးပြီး တကိုယ်လုံး စိမ်ပါတဲ့.. ဂျပန်တွေကတော့ အပူရှိန် ခံနိုင်ရည် အားကောင်းကြတဲ့ အပေါ် ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်.. အားလုံး ရောက်ရင် အထုတ်ချပြီး သွားချိုးကြ အကြောအချဉ်ပြေတယ်.. ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်လျှော်တယ်.. သူက ဘာမှ မပါဘဲ သွားမှ အထဲကို ၀င်လို့ရတယ် ပါရင် မရဘူး ဆိုတော့.. ဟိုတယ်မှာ ညဘဲ အိပ်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်.. ရေချိုးတာ ဘယ်လိုနေလဲ ဆိုတာတော့ မသိလိုက်ဘူး..
ရေပူစမ်း ကရေက ဘာထူးခြားလဲတော့ မသိဘူး.. ပူနေတာတော့ အမှန်ဘဲ..
ထင်တာတော့ အေးတဲ့ နေရာဆိုတော့.. ချွှေးမထွက်လို့ အခိုးပိတ်နေတဲ့ လူသားတွေ ရေပူစမ်းက ရေအပူရှိန်နဲ့ ချွေးတွေ ထွက်ပြီး အကြောအချဉ်တွေ လျော့သွားတာလို့ ထင်တာဘဲ.. ဒီတိုင်းပြည်က လူတွေကတော့ နေ့တိုင်း ချွှေးတွေ စိုနေလို့.. တော်ယုံ အငန် နဲ့တောင် အဆင်မပြေလို့.. ငပိ နေ့တိုင်းစားပြီး ဒူးခိုင်အောင် လုပ်နေကြရတာ.. ခဏလေး သွားတာ.. ရေပူစမ်းမှာ အခိုးထုတ်ဖို့တော့ လိုမယ် ထင်ဘူး.. (ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်)
တော်သေးတာပေါ့ .. တရုတ်ပြည်မှာ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ကန်ထဲအ၀င်ခံပေလို့ .. နို့မို့ဆို ပေးထားတဲ့ပိုက်ဆံ အဆုံးခံလိုက်ရမှာ …